तनहुँको ड’रलाग्दो घ’ट’ना छोराको श’व घरमा, आमाछोरीको नदी किनारमा। छोरा छोरीको लागि आमाको त्या’ग (भिडियो) – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Video/तनहुँको ड’रलाग्दो घ’ट’ना छोराको श’व घरमा, आमाछोरीको नदी किनारमा। छोरा छोरीको लागि आमाको त्या’ग (भिडियो)
तनहुँको ड’रलाग्दो घ’ट’ना छोराको श’व घरमा, आमाछोरीको नदी किनारमा। छोरा छोरीको लागि आमाको त्या’ग (भिडियो)
तनहुँ – तनहुँको व्यास नगरपालिका १ निर्मलबस्तीमा एकै परिवारका तीन जना खत शनिवार मृ’त अवस्थामा भे’टि’एका थिए । अ’पाङ्गता भएका १५ वर्षीय छोरा विपीन श्रेष्ठको शुक्रबार तथा आमा ३४ वर्षीया रवीना र अपाङ्गता भएकी ११ वर्षीया छोरी प्रिया शनिबार मृ’त भेटिएपछि यतिबेला गाउँ शो’कमा डुबेको छ ।
मृ’तक विपीनको प्रहरीले मुचुल्का तयार गरी शुक्रबार नै शव पर’ीक्षण गरी दा’ह सं’स्कारका लागि आफन्तजनलाई जिम्मा लगाइएको थियो । उनको मृ’त्यु हुनु दुई दिनअघि (वैशाख १० गते) देखि नै उनका आमा र बहिनी ह’राएपछि उनीहरुको खोजी गरिदिन आफन्तजनले प्रह’रीमा जा’हेरी दिएका थिए ।
छोराको घाँ’टीमा डो’रीले बाँ’धेको जस्तो दा’ग देखेपछि आमाले ह’त्या गरी फ’रार भएको हुनसक्ने प्रहरीले आशङ्का गरे पनि शनिबार आमा छोरी मादीसेती नदीकाे किनारमा मृ’त अवस्थामा भेटि’एपछि प्रहरीले घट’नाका बारेमा अहिल्यै केही भन्न नसकिने जनाएको छ ।
एकै परिवारका तीन जनाको मृ’त्युको खबरले यतिबेला गाउँ नै स्त’ब्ध भएको निर्मल टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष अम्मर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । मृ’तक रवीनाका श्रीमान् हरिकृष्ण भारतीय प्र’हरीबाट अवकाशपछि भारतमा नै काम गर्दै आउनुभएको छ । (हेरौ यो भिडियो)
एकदमै खुसिको खवर! नेपालको सिमाबाट यसरी भा#ग्यो भारती सेना, भारतले मान्यो यस्तो । (हेर्नुहोस भिडियो)
चार बर्षकी सितल आमा बनेर भाईको स्याहार गर्दै (हेर्नुस् भिडियो)
काण्डै काण्डको बिचमा बाहिरियो नर्स काण्ड, के हो नर्स काण्ड ? (भिडियो सहित्)